Ezilishumi zeenoveli ezilungileyo zexesha lonke. | Uncwadi lwangoku
Iincwadi ezili-XNUMX zeyona mifanekiso mihle yexesha lonke.
UAna Lena Rivera Muñiz | | Inoveli
Iimfazwe zeHlabathi kunye neMfazwe ebandayo: amashumi eminyaka ezopolitiko zixubusha kangangokuba ziye zabangela ukuba lube lolunye lwezona zincwadi zifundwayo ezifundwayo kwinkulungwane yama-XNUMX.
Iinoveli zokuhlola luhlobo loncwadi oluvelise imidlalo emikhulu, iimuvi ezintle, kunye neeyure ezininzi zokuzonwabisa. Olu lukhetho lomntu, kangangokuba phakathi kwabo sifumana ababhali abanjengoAgatha Christie okanye uPhillip Kerr.
Imfazwe ebandayo kunye neemfazwe ezimbini zehlabathi yayiyindawo eyintandokazi yababhali bohlobo olwalunencopho yalo kwisiqingatha sesibini senkulungwane ephelileyo, kodwa oko kuyaqhubeka ukuvelisa amabali amahle namhlanje, asetwe, ewe, kwimeko efanayo. Inye kuphela kwabo bakuluhlu, inombolo yeshumi, eyakhiwe ngenkulungwane yama-XNUMX.
1 Ayisiyiyo kuphela iCaviar yoMntu oPhila nguJohannes M. Simmel.
2 UMolekyuli nguJohn Le Carré.
3 Umsebenzi omnandi ka-Ian McEwan
4 U-Graham Greene waseMelika ongapheliyo
5 Inkosi ka-Agatha Christie eyimfihlakalo uBrown.
6 Ukusuka eRashiya ngothando oluvela ku-Ian Fleming
7 Ubusika eMadrid nguCJ Sansom
8 Elinye icala lokuthula nguPhillip Kerr
9 Udyakalashe nguFrederick Forsyth
10 Umcimbi weBourne kaRobert Ludlum
Ayisiyiyo kuphela iCaviar yoMntu oPhila nguJohannes M. Simmel.
Enye yeenoveli ezinkulu zobuntlola ezingaziwa ngabo bonke abathandi bohlobo. Namhlanje kuphelile emva kokuthengisa iikopi ezingaphezulu kwezigidi ezingamashumi amathathu kwihlabathi liphela, ukusukela oko yapapashwa ngo-1960. Ezahlukileyo, ngoncumo oluhlekisayo olwenza ukuba lube lukhethekileyo kunye neeresiphi ezininzi. Ibalisa ibali likaThomas Lieven, umgcini-bhanki waseJamani ohlala eLondon, lowo amaqabane akhe afuna ukumsusa ukuze agcine isabelo sakhe ebhankini kwaye amenzele umgibe. Embindini weMfazwe yesibini (II) yeHlabathi, wanyanzelwa ukuba asebenze njengentlola yamaJamani kwaye, kamva, wasebenzela amaBritane namaFrentshi. U-Lieven, umntu olwela intliziyo ngentliziyo, kuya kufuneka atshintshe isigxina sobuntu bakhe kwaye anxibelelane nabanye babalinganiswa abaziwayo ngalo mzuzu, abaya kuthi babonisane ngemibhiyozo emnandi eneendlela zokupheka ezisencwadini. Kwii-foodies: ezizodwa.
Kuthathwa kwabe-movie ngo-1961.
UMolekyuli nguJohn Le Carré.
Ipapashwe ngo-1974, iyaqhubeka ukukhutshwa ngo-2018. Yakhishwa kwiithiyetha ngo-2011, apho kudlala khona uGary Oldman.
UGeorge Smiley, oyindoda enengxaki enemfesane engapheliyo, naye ulutshaba oluzimiseleyo nolungayekiyo njengempimpi.
Indawo angena kuyo yindawo yemfazwe ebandayo, yee-moles kunye ne-bluffers, yabazingeli bekhanda kunye nabadlali bezitalato, apho kuthengiswa khona amadoda, atshiswe kwaye athengwe. Umsebenzi kaSmiley kukubamba i-mole evela eDowntown Dolophu yaseMoscow, oye wangena kwi-Circus ngokwayo iminyaka engamashumi amathathu.
Umsebenzi omnandi ka-Ian McEwan
Koku kutshanje kuluhlu, olwapapashwa ngo-2012, nangona lubekwe eNgilane, ngo-1972.
Embindini weMfazwe ebandayo, umfundi oselula uSerena Frome ugaywa eCambridge yi-MI5. Umsebenzi wakhe: ukwenza isiseko sokunceda ababhali benoveli abathembisayo, kodwa eyona njongo yabo ikukuvelisa ipropaganda echasene nobukomanisi. Kwaye ebomini bakhe obulawulwa yinkohliso ungena kuTom Healy, umbhali oselula oya kuthi athandane naye. Kude kufike umzuzu xa kuya kufuneka athathe isigqibo sokuba aqhubeke nobuxoki okanye amxelele inyani ...
Incwadana enomdla wothando, eyongezwa kumgangatho ophezulu weencwadi zayo, inika ubungqina obuyimfuneko ukuba bubekwe kuloluhlu.
U-Graham Greene waseMelika ongapheliyo
Ishicilelwe ngo-1958, isathengiswa nangoku. Yasiwa kumboniso bhanya-bhanya ngo-2002, apho kudlala khona uMichael Caine.
Intatheli yase-Bhritane ethandabuzayo, u-Thomas Gowler, intombazana engenalwazi u-Annamite, u-Foung, kunye ne-American engenantsingiselo ephuma nje ekholejini, u-Alden Pyle, wenza unxantathu oqaqambileyo oqaqambisa i-The Impassive American, ngokungathandabuzekiyo yeyona noveli ibhalwe malunga nongquzulwano lwemfazwe. Indochina kwiminyaka yee-XNUMX.
Ifilimu esekwe kwinoveli namhlanje yifilimu yehlelo, eyayiyintsilelo kwinkampani yemveliso: yayingaphantsi kakhulu kwiofisi yebhokisi kunexabiso lemveliso.
Inkosi ka-Agatha Christie eyimfihlakalo uBrown.
Ishicilelwe ngo-1922, isathengiswa nanamhlanje. Kungumtshato wesibini esitshutshisayo, uTommy kunye noTuppence, esenziwe ngumfazi omkhulu wolwaphulo-mthetho. Kuyo, kukhangelwa amanye amaxwebhu afihlakeleyo, abhalwe ngexesha leMfazwe yokuQala yeHlabathi, elahlekileyo ekuchithekeni kwenqanawa eLusitania, kunika umlo phakathi kweenkonzo zase-Bhritane eziyimfihlo kunye neqela lemigulukudu elifuna ukusebenzisa amaxwebhu njengesixhobo Yeentetho zeBolshevik. Kwi-maelstrom yemfazwe yobuntlola kubonakala abafana ababini, uTommy noTuppence, abazimisele ukubeka ubomi babo emngciphekweni wokutyhila ukuba ngubani oyinkokeli yeqela lemigulukudu: uMnu.
Ziziswe kumabonakude kwi 80s.
Ukusuka eRashiya ngothando oluvela ku-Ian Fleming
Yapapashwa ngo-1957 kwaye yenziwa imovie ngo-1963 kunye noSean Connery kwindima kaJames Bond.
Iinkonzo zobuntlola zamanye amazwe anempembelelo zinefayile eneenkcukacha kuJames Bond, eyona arhente iyimfihlo yaseBritane emhlabeni. Kodwa iSMERSH, umbutho waseburhulumenteni owoyikekayo waseRussia, ikwazile ukuyiphelisa, isenza isidenge ngeenkonzo zaseBritani eziyimfihlo ngokudlula. Umlobothi ogqibeleleyo nguTatiana Romanova ongenakuphikiswa, ibhinqa eliselula ekucingelwa ukuba lifuna ukuyeka umsebenzi kwigqiza laseRussia eIstanbul, liphethe ikhowudi yekhowudi ebalulekileyo. IBond iye yayalelwa ukuba imncede; Kuya kufuneka amlalise ngelixa umbutho ogqwethekileyo ukhathalela abanye ...
Enye yezinto ezinomtsalane kukuba indawo enkulu eyenzekayo e-Istanbul nakwi-Express Express.
Igama lam ndinguBond… uJames Bond.
Ubusika eMadrid nguCJ Sansom
Ipapashwe ngo-2006 kwaye yabhalwa ngumbhali waseScotland, iya ngaphaya kwemida yeemfazwe zehlabathi kunye nemfazwe ebandayo eyalandelayo phakathi kwe-US ne-Russia, ukubeka inhloli yase-Bhritane kwimfazwe yamakhaya yasemva kwe-Spain, ekuqaleni kobuzwilakhe buka-Franco. .
Unyaka ka-1940. Enganqandeki, amaJamani ahlasela iYurophu. IMadrid iyalamba kwaye iye yaba yindawo yokuhlola iintlola kuwo onke amagunya ehlabathi. UHarry Brett wayelijoni langaphambili elabona iMfazwe yamakhaya kwaye wahlukumezeka emva kokufuduswa kweDunkirk. Ngoku usebenzela inkonzo eyimfihlo yase-Bhritane: kufuneka aphumelele ukuthembela kumfundi wakhe wakudala afunda naye uSandy Forsyth, ozibandakanya kwizivumelwano ezingathandekiyo eSpain yeCaudillo. Endleleni, uHarry ubanjwe kumdlalo oyingozi kakhulu kwaye ukhathazwa ziinkumbulo ezibuhlungu.
UBernie Gunther, ipolisa elidumileyo laseJamani elenziwe nguPhillip Kerr, lingena kwiqhinga lokuhlola elalibekwe kude kudala phambi kokuwa kodonga lwaseBerlin.
Elinye icala lokuthula nguPhillip Kerr
Lulolweshumi elinanye uthotho lweenqaku apho uBernie Gunther, ipolisa laseJamani, okwangoku eli bali lenzeka, ngo-1956, sele ethathe umhlala-phantsi kwi-French Riviera. Kuya kufuneka akhokele kubuntu obuzolileyo, kodwa ayinakwenzeka loo nto kuye. Ixesha elidlulileyo lemfazwe lifikelela kuye lisuka kwigosa lamaNazi. Ukongeza, umenyiwe e-Villa Mauresque ngumbhali odumileyo uWilliam Somerset Maugham, otyholwa ngempahla kwaye ufuna uncedo. Isenokuba ngumbandela wobuqu. Okanye unokuba ulixhoba lomlo ohlola ubugorha entliziyweni yaseYurophu.
Intshontsho nguFrederick Forsyth
Yapapashwa ngo-1971 yaza yenziwa imovie kabini: ngo-1973 edlala no-Edward Fox kwaye kwakhona ngo-1997 eno-Bruce Willis no-Richard Gere. Mhlawumbi yeyona noveli idumileyo kuluhlu. Umqhubi wezithuthuthu, umntu ofuna ukulwa nenkunzi eMalaga, kunye nomqhubi wenqwelomoya weRAF eneminyaka elishumi elinesixhenxe, uFrederick Forsyth waqala esemncinci kakhulu kwihlabathi lobuntatheli. Ukuthunyelwa yiarhente yeReuter ukugubungela uhambo lukaGeneral de Gaulle, ngexesha lokuhlaselwa kwe-OAS, wagqiba kwelokuba axele ngohlaselo olungaziwayo: lowo wayegunyazisiwe Intshontsho, umbulali odumileyo.
Umcimbi weBourne kaRobert Ludlum
Yapapashwa ngo-1980 kwaye yenziwa imovie ngo-2002, eneenkwenkwezi uMat Damon. Indoda, yadutyulwa kwaye isecicini lokufa, yahlangulwa elwandle ngabalobi baseFrance. Emva kweentsuku ezininzi engekho zingqondweni, uza kuye. Kodwa yena ngoyaba igama lakhe, ubuzwe, imvelaphi: yonke into. I-amnesia yakhe igqibelele. Inqaku elinye liyamdibanisa nexesha elidlulileyo: imicrofilm ayinxibe phantsi kolusu, kwaye iqulathe inani leakhawunti yebhanki eZurich. Ukusuka kweso sikhombisi, umfokazi uqala ukulandelela ubuqu bakhe eZurich, Marseille, Paris, New York ... Into ayifumanisayo iyoyikisa. Kule labyrinth, amanyathelo akhe ajolise ngokungathandabuzekiyo kwabona banqolobi bafunwayo kwilizwe liphela: "UCarlos."
Nayiphi na kubo-ukhetho olukhulu lwasemva kwemini yokuwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Iincwadi ezili-XNUMX zeyona mifanekiso mihle yexesha lonke.
Ukubhala, uncwadi, iincwadi ... Ukubonakaliswa kwababhali abangama-40
6 ukufundwa kwabantwana nolutsha ngokufundwa kwekwindla